Yaa ka masuul ah Dhulboobka Gurigii Martidda ee magaaladda Sheek
Wednesday September 05, 2018 - 21:51:04 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Yaa ka masuul ah Dhulboobka Gurigii Martidda ee magaaladda Sheekh iyo dhaxal wareejinta wakaaladii biyaha , gobolka saaxil. Degmadda Sheekh,
Yaa ka masuul ah Dhulboobka Gurigii Martidda ee magaaladda Sheekh iyo dhaxal wareejinta wakaaladii biyaha , gobolka saaxil.
Degmadda Sheekh, oo ku caan ah goob waxbarasho oo dalxiiska ku wanaagsan, ayaa beryahan dambe waxa sii kordhayey dhulboob iyo musuqmaasuqa hadheeyey dawladda hoose ee magaaladda sheekh, iyadoo ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa.
Hadda, waxa ugu dambeysay in la bixiyo qayb ka mid ah dhulkii iyo guryihii qadiimka ahaa ee magaaladda gaar ahaan xaafadda shacabka ee dhanka woqooyi ee magaalada ku taal.
Goobahan oo ay ku badanyahiin guryaha dawladda dhexe maamusho iyagoo ah hanti qaran, ayaa inta badan ay guryahaasi yihiin qaar dunsan iyo qaar ay dadkale iskaga jiraan sife aan sharciga waafaqsanayn.
Marka laga yimaado inta guryahan taariikhiga ah ee dunsan iyo kuwa la isticmaalo. waxa jira dhul banaan oo ay fadhataysatay dawladda hoose iyagoo sifo aan sharci ahayn u bixisay inta badanna uu dhulkaasi marsanyahay sees (foundation stone). Iyadoo guryahaas qaar ka mid ah laga iibiyey dad shicib ah isla markaana ku sameeyeen dibu dhis iyagoo kusoo kordhiyey dayrar waaweyn oo xidhay wadooyinka qaar, sidda waddada gasha guriga martidda. (Ex sheikh guest house). waana ayaan daro in musuqmaasuqa ka socda degmadda aanay dawladda dhexe kaba war hayn, iyadoo maamulka dawladda hoose ee magaaladda sheekh waxba aanu ku qaban cashuurtii laga qaadayey gaadiidka wadada mara, inay hadana ku darsato inay xaraashaan hantidii qaranka ee ay ka midka yihiin goobahan taariikhiga ah ee la dhisay wakhtigi hore ”colonial era”.
In badan dadweynaha magaaladu waxay hadal hayeen in loo dhiso guriga martida waa isla gurigaase, dhawr jeer ayuu madaxweynahii hore JSL mr. Siilanyo balanqaaday inuu dhisayo gurigaas iyadoo uu madaxweynahu laba jeer oo kala dambeeyey dhagax dhigay inkastoo aanay balan qaadyadaas waxba ka fulin.
https://horseednews.com/ articles/1473/ DaaawoMadaxweynaha-Somaliland- Silaanyo-oo-Xadhiga-Ka-Jaray- Cisbitaalka-Sheekh- Dhagaxdhigayna-Guriga-Martida- Sheekh-oo-la-dhisayo-Sawiro
Sidaas awgeed,waxaan ugu baaqayaa dhamaan bulshoweynta somaliland iyo maamulka gobolka saaxil inay joojiyaan boobka lagu hayo dhulka iyo dhismayaasha taariikhiga ah ee magaaladda sheekh. Waayo cid kale oo ka damqanaysaa ma joogto, maamulkii magaaladduna waxa uu ku mashquulay fadhataysiga hantidda umadda iyo lunsiga cashuuraha laga qaado gaadiidka wada mara.
Sidoo kale adeegyadda Bulshada tii ugu muhiimsanayd oo ah biyaha ayaa sife sharcidarro ah loogu wareejiyey shirkad gaar ah oo uu leeyahay maayarka berbera mr. Cabdishakuur cidin.
Haddaba, waxaanu ka codsanaynaa madaxdda heer gobol iyo xukumadda dhexe inay waxka qabtaan fadhataysigga dhulka iyo wareejinta wakaladda biyaha ee degmadda sheekh oo ay wadaan horena ugu kaceen si aan sharcigga waafaqsanayn maamulka dawladda hoose. Ugu danbayntii waxaanu ka codsanaynaq madaxweynaha JSL mud. Muuse biixi inuu arimahaas sidda ugu dhakhsaha badan wax uga qabto
Axmed Cumar Sahal.